အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးကိုယ်ပိုင် Direct Ira နှင့်ဥပဒေရေးရာပါသလဲ သိကောင်းစရာများ, အကောက်များနှင့်အရိပ်အမြွက်
NOW ကထည့်သွင်းLLC သည်ကော်ပိုရေးရှင်း
ဘယ်ချိန်မဆို Call 24 /71-888-444-4812
ကိုယ်ပိုင် Direct Ira LLC
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို start-up နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုန်ဆောင်မှု။
တစ်ဦးကကိုယ်ပိုင် Direct Ira LLC အသစ်တစ်ခုကုမ္ပဏီနှင့်ဤအမှု၌ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီရှိရာတစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုညွှန်ကြား Ira ဝယ်ယူမှုဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ ကိုယ်ပိုင် Direct Ira သစ်ကို LLC ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း, Ira ပိုင်ရှင်တစ်ခုလုံးကိုန့်အသတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်, သင်။ ဤသည် LLC မန်နေဂျာရဲ့ထိုင်ခုံချက်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုပေးပါသည်နှင့်သင့်အငြိမ်းစားရန်ပုံငွေများများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်နိုင်ခြေ၏တစ်ဖွဲ့လုံးအသစ်ကအကွာအဝေးဖွင့်လှစ်။ သင်သည်သင်၏ Ira LLC သည်၏အဖွဲ့ဝင်တဦး (ပိုင်ရှင်) အကောင့်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများများအတွက်လျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိနိုင်သူတစ်ဦးကုမ္ပဏီမန်နေဂျာ assign လိမ့်မယ်ပါစေ။ LLC သည်မန်နေဂျာထိုကဲ့သို့သောညွှန်ကြားအဖြစ်စာချုပ်များ, ဝါယာကြိုးရန်ပုံငွေများနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲစစ်ဆေးမှုများကွပ်မျက်အဖြစ်တစ်ရက်-to-နေ့ကကုမ္ပဏီလှုပ်ရှားမှုများအပြေးလိမ့်မည်။ ဒါဟာသင်ဘယ်လောက် setup ကိုသင့်ရဲ့ Ira အဘို့သင့် LLC နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံပရော်ဖက်ရှင်နယ်၏အကူအညီကိုရှာသောသူတို့ကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ညွှန်ကြား Ira LLC ထူထောင်တဲ့အခါမှာလိုက်နာရနျလိုအပျကွောငျးကိုစည်းမျဉ်းများ, ပုံမှန်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအထူးသဖြင့်အစအဦး၌, ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာနဲ့ဗွေဆော်, Ira ညွှန်ကြားသင့်လက်ရှိမိမိကိုယ်ကိုသင့်ရဲ့ Ira ပြီးသားထို့နောက် အကယ်. သင်ဤအသစ်က LLC သို့သင့်ရဲ့အငြိမ်းစားရံပုံငွေ Self-ပြင်ဆင်ထူထောင်ထားရပါမည်, ဆိုလိုတာက LLC သည်၏ရှယ်ယာများဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။
လူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းရေးပြင်ဆင် file မှဥပဒေရေးရာစာရွက်စာတမ်းန်ဆောင်မှုများတဲ့ professional ပံ့ပိုးပေးဖို့ကိုဖွင့်, Ira LLC ညွှန်ကြားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မိမိကိုယ်မိမိထူထောင်ဖို့ရွေးချယ်ကြပါဘူး။
တစ်ဦးကိုယ်ပိုင် Direct Ira LLC ကိုတည်ထောင်အနာဂတ်ပြဿနာများရှောင်ရှားရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပြုမိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးနှင့်အငြိမ်းစားယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင့်ဖန်တီးခြင်းကိုအမိန့်နှင့်သဘောတူညီချက်ပြင်ဆင်ချက် operating မှန်ကန်သောပြည်တွင်းရေးကုမ္ပဏီနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲ၌ပြစ်မှားမိစေအရေးကြီးပါတယ်။ အရောင်းအပု Ira သို့မဟုတ် LLC တည်ထောင်သင့်လျော်စွာဖွဲ့စည်းပုံမှာမပေးကြောင်းအဆိုပါဖြစ်ရပ်အတွက်တားမြစ်သည်နိုင်ပါသည်။ တားမြစ်ထားသောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအဆိုပါ Achilles များမှာ အနိမ့်အဖိုးအခနှင့်အခွန်လွတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမြတ်အစွန်းရိတ်၏ရွတ်။ သင့်ရဲ့ Ira LLC စဉ်ဏုအောက်မှာလာလျှင်, သင်၏အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဖွဲ့စည်းမှန်ကန်သောဖြစ်ကြောင်းအမြဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Ira LLC ဝန်ဆောင်မှု၏စျေးနှုန်းကဒီသဘာဝတရား၏ဆိုးကျိုးများမှရှောင်ရှားရန်အမည်ခံဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်းအသာအငြိမ်းစားအစီအစဉ်အကျိုးအမြတ်သူတို့အားန့်အသတ်ရှိပါတယ်နှင့်မည်သည့် disqualified ပါတီများအကြားမရှိကြပေ။ ဤသည်မှာထိထိရောက်ရောက်မအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသတ်မှတ်သည်, အသေးစိတ်များအတွက်, disqualified ပါတီများအပေါ် IRS ကိုစာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ရှုလော့
အဆိုပါ Ira ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်၏အိမ်ထောင်ဖက်ကို
အဆိုပါ Ira ပိုင်ရှင်၏ချက်ချင်းမိသားစု, သားသမီး, မိဘများ, etc
တစ်ဦး disqualified လူတစ်ဦးခြင်းဖြင့်ထက်ပိုမို 50% ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတစ်ခု entity
တစ်ဦးက 10% ပိုင်ရှင်အရာရှိ, ဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦး disqualified လူတစ်ဦးကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ entity
အဆိုပါ Ira ၏တစ်ဦးကကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်
အဆိုပါ Ira မှန်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းမည်သူမဆို
အောက်တွင်တားမြစ်ထားသောအရောင်းအသငျတို့သ Ira LLC ညွှန်ကြားတစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပွုနိုငျသည်အခြားအမှုအရာများစာရင်းကိုသည်:
အငြိမ်းစားပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြု. ချေးငွေများ Collateralize
အဆိုပါ Ira မှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအိမ်ခြံမြေရောင်း
disqualified ပုဂ္ဂိုလ်များမှပိုက်ဆံ Loaning
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညွှန်ကြား Ira LLCs ပေးသောအဆမဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူတစ်တားမြစ်ထားသောငွေပေးငွေယူလုပ်မယ့်လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်ဘယ်တော့မှပါပဲ။ သင့်ရဲ့အငြိမ်းစားရံပုံငွေကျော်ချက်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ, Ira LLC ညွှန်ကြားကိုယ်ပိုင်မတူကွဲပြားမှုအတွက်အဆုံးစွန်လိုလားတဲ့သူဘယ်သူ့ကိုမှများအတွက်သာလွန်အငြိမ်းစားရံပုံငွေမော်တော်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေအငြိမ်းစားရံပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်တစ်ဦး Ira LLC နှင့်အတူကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအတိုရောင်းအားအပေါ်လုပ်ရပ်နဲ့တူအမြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖြစ်ကြပြီးအခွန်-အခမဲ့အငြိမ်းစားရန်ပုံငွေ၏အကျိုးအတွက်အမြတ်အစွန်းစုပြုံနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာတွင်တစ်ခု Ira LLC အငြိမ်းစားရန်ပုံငွေတိုးတက်မှု၏မြင့်မားမှုနှုန်းအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျကိုဘယ်လိုတခုတခုအပေါ်မှာဥပမာမှတဆင့်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦး Ira LLC ကိုအသုံးနည်း။
သင်တစ်ဦး Ira အကောင့်ထဲမှာ 150,000 $ သင် foreclosure လေလံမှတဆင့်ဆည်းပူးကြောင်းအိမ်ခြံမြေသို့ရှိသူများရန်ပုံငွေများရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ Ira အကောင့်အဖြစ်တစ်ဦးတည်းသောအဖွဲ့ဝင်စာရင်းတစ်ခုလည်ပတ်မှုသဘောတူညီချက်နှင့်အတူတစ် LLC ဖန်တီးပါ။ သင်က LLC ဘဏ်အကောင့်ထဲတွင် $ 150,000 ဝါယာကြိုးမှ LLC သည်များအတွက်ဘဏ်အကောင့်ကို set up နှင့်သင့် Ira အုပ်ထိန်းသူကိုသွန်သင်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့စနစ်တကျဖွဲ့စည်း, ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ Ira LLC နှင့်အတူ, သင်၌တရားခုန်နှင့်ထို foreclosure ရောင်းအားတွေထက်တောင်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ $ 120,000 ဖြုန်းနဲ့ဝယ်ယူနှင့်သင့် Ira ကပိုင်ဆိုင်ကြောင်း LLC သည်မှအမည်ရပါလိမ့်မည်အားလုံးသောလေးနေအိမ်များ, ဆည်းပူး။ သင်တစ်ဦးနှစ်အနည်းငယ်များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအိမ်ခြံမြေငှားရမ်းခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်, အခွန်, အာမခံနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါငျးတို့သ LLC ဘဏ်အကောင့်ကို အသုံးပြု. ကုမ္ပဏီကများအတွက်ပေးဆောင်နေကြပါတယ်။ ငှားရန်ကနေဝင်ငွေ LLC သည်တိုက်ရိုက်တတ်၏။ LLC သည် Ira ကပိုင်ဆိုင်သည်ကတည်းကအမြတ်အစွန်းကိုအခွန်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အခွန်လွတ်အမြတ်အစွန်းအတွက်လာအတိုင်း, သင်တို့၏ Ira ၏အတွင်းပိုင်းကြောင်း LLC သည်အငြိမ်းစားအစုစုအတွက်အမျိုးမျိုးတိုးမြှင့်ဖို့ကပိုအိမ်ခြံမြေ, ရွှေ, စတော့ရှယ်ယာများသို့မဟုတ်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမဝယ်နိုင်ပါ။
ငွေသားစီးဆင်းမှုအတွက်သင့်ငှားရမ်းမှုပိုင်ဆိုင်မှုပိုက်ကွန် $ 500 ၏အသီးအသီးပါလျှင်ကိုယ့်ငွေသားစီးဆင်းမှုအတွက် 16% တိုးဆိုလိုပေသည်။ သင်နေအိမ်များရောင်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီတဲ့အခါမှာ, သင်ပိုင်ဆိုင်မှုဖျက်သိမ်းပြီးပါလိမ့်မယ်နှင့်သင့် Ira ပိုပြီးအခွန်လွတ်ငွေဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။ သင်က LLC ဘဏ်အကောင့်သို့တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းသော $ 200,000 အဘို့သင့်နေအိမ်များရောင်း။ သင့်ရဲ့ကနဦး $ 150,000 $ 272,000 မှစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။
Ira LLC ပိုင်ရှင်များအဘို့လက်မ၏အထွေထွေစည်းကမ်းများ
တားမြစ်ထားသောအရောင်းအရှောင်ရှားရန်ကဘယ်လို။ အဆိုပါ Ira LLC ပိုင်ရှင်တွေ, မိသားစုအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ် linear ဆင်းသက်လာဘယ်တော့မှသင့်ပါတယ်:
အဆိုပါ Ira LLC ထံမှပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေရရှိကြသည်။
အဆိုပါ Ira မဆိုပိုင်ဆိုင်မှုအကြိုးခံစားသို့မဟုတ်သုံးပါ။
အဆိုပါ Ira ထံမှပိုက်ဆံပေးချေရမည်။
အဆိုပါ Ira LLC မှ, လျော်ကြေးသို့မဟုတ်မန်ဆောင်မှုများပေး။
မည်သည့်မဟုတ်တဲ့လက်မောင်းရဲ့အရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြည့်ရှုလျက်ရှိသည်လျှင်, သင်တစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်မီငွေပေးငွေယူအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ အများဆုံး Ira LLC ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုနဲ့အသုံးစရိတ်ရောနှောပါဝင်သည်တစ်ဦးငွေပေးငွေယူတားမြစ်ထားသောနိုင်ပါတယ်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ သင်သေချာမသိရှိပါက, တကြ် CPA သို့မဟုတ်အခြားအရည်အချင်းပြည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မေးကြည့်ပါ။ သငျသညျအခွင့်အာဏာသေချာဖြစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်သာထိတွေ့ဆက်ဆံ။
LLC သည်ဖွဲ့စည်းသည့်အခါ Ira ပိုင်ရှင်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အဘို့အတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါဟာသတိထားဖွဲ့စည်းရေးလိုအပ်ပါတယ်ပေးသောအထူးရညျရှယျရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမော်တော်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ operating သဘောတူညီချက်, အခွန်အခြေအနေ, ပိုင်ဆိုင်မှုဖွဲ့စည်းပုံ, လုပ်ငန်းလည်ပတ်အခမ်းအနားမအားလုံးကိုအထူး Ira ပြဋ္ဌာန်းချက်လိုအပ်သည်။ တစ်ဦးကစိတ်ချရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုခုသင်တို့အဘို့ဤအတည်ထောင်ရန်သင့်ပါတယ်။
AKA အိမ်ခြံမြေ Ira
အိမ်ခြံမြေ IRAs အငြိမ်းစားအကောင့်ပိုင်ရှင်တွေအခွန်လွတ် Ira ရန်ပုံငွေနှင့်အတူအိမ်ခြံမြေဝယ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုပါ။ သင်တစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများရေးသားခြင်းသကဲ့သို့အစာရှောင်ခြင်းအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူနိုင်ပြီးသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအုပ်ထိန်းသူခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ငွေပေးငွေယူအဖိုးအခမှဘာသာရပ်မရှိကြပေ။ သငျသညျငွေပေးချေမှုကိုဆင်းစေနှင့်သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏တိုးတက်မှုမူတည်ပြီးမှ nonrecourse အိမ်ခြံမြေချေးငွေများရယူနိုငျပါသညျ။ တစ်အိမ်ခြံမြေ Ira အစီအစဉ်တစ်ခု LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရိုးရာ Self-ညွှန်ကြား Ira အုပ်ထိန်းသူကိုအသုံးပြုပြီးနှိုင်းယှဉ်ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကယ်တင်နှငျ့သငျဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီများမှအဖြစ်လူသိရှင်ကြား, ကော်မရှင်-အခမဲ့ကုန်သွယ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့နိုင်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ Plus အားသင်အိမ်ခြံမြေနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဝယ်ယူရန်သုံးကြောင်း LLCs ကိုသုံးနိုင်သည်။
အဆိုပါ Self-ညွှန်ကြား Ira LLC တစ်ဦးချင်းအငြိမ်းစားအကောင့်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူဘို့ရှေးခယျြမှု၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမော်တော်ယာဉ်ဖြစ်လာသည်။ ရိုးရှင်းစွာအ Ira LLC ညွှန်ကြားနေတဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုသင်ဘယ်မှာကိုယ်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်က LLC ချက်နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျမှရရှိနိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအနည်းငယ်အမည်ကိုမှမြေယာအပေးအယူ, တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံများ, ကွန်ဒိုမီနီယံစီမံကိန်းများ, မိသားစုနေအိမ်များဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညွှန်ကြား Ira LLC ကို အသုံးပြု. မှတ်စုများ, အခွန် liens, အခွန်ကငျြ့, နိုင်ငံခြားသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းအိမ်ခြံမြေဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။
Ira ညွှန်ကြားသင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဘို့အကာ LLC နှင့်အတူ, သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ:
ချက်ချင်းဝယ်ယူမှု Make - အိမ်ခြံမြေ foreclosures ပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်အခွန် liens သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချေးငွေများပါစေ။
(လိုင်စင်ရအခွန်အကြံဉာဏ်ကိုရယူရန်သေချာစေပါ) (LLC သည်များအတွက်အလုပ်လုပ်) သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုမန်နေဂျာ Be နှင့်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ကယ်တင်နှင့်သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျော်ပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်။
သငျသညျအနားယူသည်အထိကထွက်ဆုတ်ထို့နောက်အငြိမ်းစားဖြန့်ဖြူးအဖြစ်ယူ - ဒီနေ့ရဲ့စျေးကွက်တန်ဖိုးမှာအငြိမ်းစားယူနေအိမ်ဝယ်ယူရန်
ကျွမ်းကျင်သူများကမြင့်မားနေသောကြောင့်ယင်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏ LLC အကြံပြုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု features တွေကိုအမွေခံရ။ သင်တစ်ဦးသည်အလွန်ရှည်လျားသောအချိန်ကာလဘို့တစ်ခုတည်းအိမ်ခြံမြေသို့သင့်ရဲ့အငြိမ်းစားရံပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုလျှင်မည်သို့ပင်သည်, အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့်တစ်ဦး Ira LLC ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်အခမ်းအနားမလိုအပ်ပါဘူးဖြစ်ကြသည်။
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုလမ်းပြဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးကိုသုံးပါ - အစဉ်အမြဲအရောင်းအတားမြစ်ထားသောကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအချို့ရှိစေသတည်း။ အတွေ့အကြုံပရော်ဖက်ရှင်နယ်နဲ့ LLC တက်သတ်မှတ်မည်။ ထို့နောက်တစ်ဦးလိုင်စင်ရရှေ့နေနှင့်စာရင်းကိုင်များ၏ဆုံးမစကားကိုစောင့်ရှောက်။ အဆိုပါရှေ့နေအဆိုပါစာရင်းကိုင်သငျသညျအခှနျလိုက်နာကြသည်သေချာအောင်ကူညီနိုငျသညျ, အရောင်းအဝယ်ဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်တားမြစ်ထားသောရှိမရှိဖျောတစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။
အစွမ်းထက်အိမ်ခြံမြေ Ira အင်္ဂါရပ်များ:
သာအနည်းငယ် Ira ထိန်းသိမ်းသင့်ရဲ့ Ira အတွက်တိုက်ရိုက်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခြံမြေ Ira သငျသညျ, ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုအရှင်သင်သည်စစ်မှန်သော Self-ဦးတည်ချက်ပေးပါ။
အိမ်ခြံမြေအရောင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းအနေဖြင့်မြို့တော်လာဘ်ကိုအခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဲ့သို့သင်တို့အစဉ်အလာ Ira ဒါမှမဟုတ်အခွန်လွတ်သင့်ရဲ့ Roth Ira အတွက်အခွန်-ရက်ရွှေ့ဆိုင်းဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးကအိမ်ခြံမြေ Ira ချက်နဲ့မြန်နှုန်းမှာငွေပေးချေမှုနှင့်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူမှုကိုဆင်းစေ Ira ရန်ပုံငွေများကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်အရောင်းအထိန်းချုပ်ကတည်းကအနည်းဆုံးမိမိကိုယ်ကို Ira အုပ်ထိန်းအခကြေးငွေညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ယင်းဂုဏ်သတ္တိများ LLCs အတွက်ပိုင်ဆိုင်သောကြောင့်, ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတရားစွဲမှုမှကာကွယ်နှင့်အခြား Ira ရန်ပုံငွေထဲကနေနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုထဲကခြားနားနေကြသည်။
ပြည်သူ့ Shell ကကုမ္ပဏီများ
နီဗားဒါးပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှ
မူပိုင်ခွင့်© 2019 Companiesinc.com | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး